प्रदेश नं. ५ मा पर्यटन विकासको एकीकृत अवधारणा NewsButwaltoday
प्रदेश नं. ५ मा पर्यटन विकासको एकीकृत अवधारणा
सुर्य थापा अर्खा, (प्यूठान)
गौमुखी गाउँपालिका र नेपाल पत्रकार महासंघ, प्यूठान शाखाद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘गौमुखी मिडिया सम्मेलन २०७६’ को अवसरमा झिमरुक नदीको उद्गमस्थल यस गौमुखी क्षेत्र अर्खा, ठूलाचौरमा उपस्थित सबै महानुभावहरुमा स्वागत अभिभवादन व्यक्त गर्दछु । यस सम्मेलनले मूलतः २०६८ सालदेखि पर्यटन मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरी यहाँको पूर्वाधार विकास कार्यको थालनी गरेको आफ्नो कार्यलाई अत्यन्त सही रुपमा आत्मसात् गरेकोमा विशेष खुसी छु ।
यस सम्मलेनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार एवं निकायहरुको उचित ध्यानाकर्षण गरी ‘लुम्विनी–स्वर्गद्धारी, गौमुखी र मुक्तिनाथ’ जस्ता प्रसिद्ध धार्मिक र सांस्कृतिक गन्तव्यहरुको एकीकृत पर्यटकीय विकास, प्रबद्र्धन र सुविधायुक्त पूर्वाधार प्रबन्ध र पर्यटकीय बजारीकरण गर्न ठोस योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिल ऋषिको तपोभुमि कपिलबस्तु, श्रृंग ऋषिको तपोभुमि श्रृंगा, पाणिनी ऋषिको तपोभूमि पाणिनी, स्वामी शशीधरको जन्मभूमि–बामरुख (हंसपुर) र तपोभूमि रेसुंगा, बालतपस्वी महाप्रभुको जन्मस्थल रुम्टी र तपोस्थल स्वर्गद्वारी एवं सच्चिदानन्द गिरीको तपोस्थल सखी, रोल्पा – यस्ता विभिन्न पावनस्थलहरु प्रदेश नं ५ मा अवस्थित छन् । विशेषतः कालीगण्डकी नदी र रिडीमा प्रसिद्ध शालिग्रामको उपलब्धतासमेतलाई बजारीकरण गर्न सकिन्छं । श्वामी, सन्त, महन्त, तपस्वी, ऋषि र महापुरुषहरुको जन्मस्थल यस भूमिलाई हालसम्म तदनुरुप विकास गर्न खासै ध्यान दिनसकेको स्थिति छैन । सुस्ता त्रिवेणीदेखि गौमुखी, ऐरावती–प्यूठान, जुँगे महादेव–बागेश्वरी, नेपालगञ्ज र ठाकुरद्वारा, वर्दियासम्मका यस्ता तमाम गन्तव्यहरुलाई पवित्र धार्मिक–साँस्कृतिक सर्किटअन्तर्गत जोडेर विकास, प्रबद्र्धन र बजारिकरण गर्नुपर्दछ । जगदीशपुर ताल–कपिलबस्तु, सुनछहारी झरना र थवाङ–रोल्पा, नारीकोट–प्यूठान अरु कैयन यस्ता संघर्षभूमि, अनि बाँके र वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षको महत्वपूर्ण हिस्सा अवस्थित यस प्रदेशलाई दिगो पर्या–पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरेर अघि बढाउन सकिन्छ ।
सभ्यताको विकासको हिसाबले हेर्दा शाक्य र कोलिय गणराज्य कपिलबस्तु र परासीका धेरै पौराणिक अवशेषहरु यहाँ रहेको तथ्य निर्विवाद छ । कोलिय सभ्यताको केन्द्र रामग्राम, बुद्धको मावली देवदह, शाक्यमुनी बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र शाक्य गणराज्यको केन्द्र, राजधानी तौलिहवा रहेको स्पष्टै छ ।
थेरावाद बुद्ध परम्पाराअनुसार नेपाल एक होइन, तीन बुद्धको जन्मस्थल हो र २९औं बुद्धसमेत यहीँ जन्मनेछन् । शाक्यमुनी बुद्ध, जसलाई संसारले गौतम बुद्धका नामले चिन्दछ । उनको जन्मभूमि लुम्बिनी हो । उनीभन्दा पहिले २५ औं बुद्धका रुपमा क्रकुचन्द बुद्ध कपिलबस्तु गोटीहवाको खेमावती भन्ने ठाउँमा र २६ औं बुद्धका रुपमा कनकमणि बुद्ध अरोरकोट, शोभावतीमा जन्मेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित छ । लुम्बिनीमा सम्राट अशोकले स्तम्भ स्थापित गरेर शाक्यमुनी बुद्धको जन्मस्थललाई सर्वप्रथम चिन्हित गरजस्तै क्रकुचन्द र कनकमणि बुद्धका जन्मथलोमा समेत एवंप्रकारले स्तम्भ खडा गरिएको थियो । र, अब जन्मिने भनिएका मैत्रीय बुद्ध पनि करिब २,५०० बर्षपछि यहीँकै पवित्र भूमिमा जन्मने विश्वास रहेको छ ।
लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेको यथार्थलाई कसैले चाहेर पनि मोड्न र छोपिन सक्दैन । सम्राट अशोकले स्तम्भ स्थापना गरेर प्रमाणित गरेको यस तथ्यलाई कसैका नक्कली प्रपञ्च, भ्रम पार्ने प्रयाशस्वरुप निर्मित भौतिक संरचना र जालसाजीले फरक पार्न संभव छैन । वास्तवमा यो हाम्रो महत्वपूर्ण पुँजी र विश्वविख्यात सम्पदा हो । यसको स्वामित्वका साथ प्रबद्र्धन र बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ । यो काम अहिलेसम्म उचितढंगले गर्न सकिएको छैन । कतिपय मान्छेको बुझाइमा समस्या भएर यो स्थिति कायम रहिआएको देखिन्छ । खासगरी बुद्ध धर्म हो कि जीवन पद्धति ? अथवा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको माध्यम ? एकथरीले यसलाई धर्मका रुपमा लिन्छन् र तदनुरुप व्याख्या गर्छन् । अर्काथरीले यसलाई जीवन पद्धति ठान्दछन् । संसारभरि बुद्धका डेढ अर्ब अनुयायीमध्ये कतिले यसलाई जीवन पद्धति त कतिले धर्मका रुपमा, तर दुबै हिसाबले मान्दछन् । यथार्थमा यो शान्तिको सत्मार्ग, वैज्ञानिक दर्शन र जीवनपद्धति हो । जीवन पद्धतिलाई अहिंसा, ध्यान र सम्यक दृष्टिमार्फत बुझ्न र बुझाउन बुद्धको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । बुद्ध आफै मूर्तिपूजाका विरोधी थिए, तर बिडम्वना पछिल्लो कालमा संसारमा बुद्धका जति मूर्ति शायद अरु कसैका बनेका होलान् । लुम्बिनीसहित बुद्धसँग सम्बन्धित चार स्थान अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बौद्धिष्ट सर्किट पर्यटनको आधारशीलाका रुपमा स्थापित छन् ।
बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा नै अनुयायीहरुलाई चार स्थानको भ्रमणका निम्ति जोड दिएको पाइन्छ । यति गरे सुशुद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ समेत भनेको स्पष्ट छ । जन्मभूमि लुम्बिनी, बुद्धत्व प्राप्त गरेको स्थान बोधगया, पहिलो प्रवचन गरेको ठाउँ सारनाथ र महापरिनिर्माण स्थल कुशीनगर–बुद्धले आफ्ना शिष्य आनन्दमार्फत यी चार स्थानको चर्चा गरेका थिए । जीवनमा एक पटक बुद्धको पावन जन्मभूमिमा पुग्ने आकांक्षा बोकेका दुनियाँभरिका बुद्धमार्गीहरुलाई लुम्बिनी र नेपालको भ्रमणमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा विल्कुलै नयाँ अवस्था सिर्जना हुने प्रायःनिश्चित छ ।
स्वर्गद्वारी आश्रम मुलुककै एउटा महत्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर हो । यसको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै ठूलो महत्व रहेको छ । यद्यपि, पूर्वाधारका हिसाबले यसको समुचित विकास अझै हुनसकेको छैन । यहाँ त्रिकालदर्शी महाप्रभुले विसं १९५२ साल बैशाख पूर्णिमाको दिनदेखि प्रारम्भ गरेको विश्व शाान्ति र कल्याणका खातिर अखण्ड होमादि महायज्ञ १ सय २५ बर्षयता निरन्तर संचालित छ ।
स्वर्गद्वारी आश्रम एकजना सामान्य नेपाली, अझ पिछडिएको आजको रोल्पामा सिंगो समाज र परिवारबाट समेत उपेक्षित–अशिक्षित र ंबहिस्कृत बालक तपस्वीले स्थापना गरी अहिलेको प्रसिद्धिमा पु¥याएको इतिहासले देखाउ“छ । यो दुई–तीन पुस्ताअघिको मात्रै मानव–साधनाको परिणाम थियो । आफ्ना भक्तजनहरुबाट प्राप्त भेटीइत्यादि खर्चेर आश्रमको सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाइएको जग्गा–जमिनको आयस्ता र अहिले पनि भक्तिजनहरुको भेटीबाट जम्मा हुने आम्दानी यसको सञ्चालन र निरन्तरताको प्रमुख आधार रहेको छ ।
स्वर्गद्वारीका बारेमा अनेकौं किम्वदन्ती छन् । ‘महाप्रभु’लाई भेट्ने पुस्ताका मानिसहरु नै अझै जीवित रहेकासमेत पाइन्छन् । वास्तवमा यो मानवनिर्मित सम्पदा हो । यसको विकासमा नया“ पिंढीले ठोस पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको सम्पत्तिका रुपमा यसको दाङमा सयौं विगाहा उर्बर जमिन रहेको छ । २०६२ साल चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाश (न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्मा)ले गरेको फैसलाबाट स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाको स्वामित्वमा सिर्जना गर्न खोजिएको कथित विवाद समाप्त भएको छ । उक्त फैसलामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ः
‘...स्वर्गद्धारी आश्रम महाप्रभु हंसानन्द गिरीको झोलीको पैसाबाट खरिद गरिएका जग्गाको आयस्ताबाट १९९६ को ताम्रपत्रमा व्यक्त गरिएको महाप्रभुको इच्छाअनुसार आश्रमकै शिक्ष्य प्रशिष्यहरुबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानबाट संरक्षित विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको देखिँदा सो आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्धारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरु भ्ूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । फैसलाको प्रतिलिपिसहित फैसला भएको जानकारी विपक्षीहरु भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गुठी संस्थान केन्दी्रय कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनु ।’
विसं १९९७ साल मंसिर १७ गते महाप्रभु ब्रम्हलीन भएको र त्यसअघि १९९६ सालमै एउटा ताम्रपत्रमा दाङमा रहेको ११ सय विगाह जग्गा सम्बन्धमा महाप्रभुको अभिप्राय स्पष्ट गरिएको थियो । खासगरी २०४६, २०५१ र २०६३ का परिवर्तन र सरकार हेरफेरसँगै स्वर्गद्वारी र मोहीबीचको अन्तहीनजस्तै विवादका कारण जग्गाबाट हुने आश्रमको आयस्ता नाम मात्रको रहेको छ । बैंकहरुले नगद मौज्दातबापतको ब्याज घटाएकाले आश्रमको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ । यहाँको अखण्ड यज्ञ संचालनका निम्ति जीवनको आखिरीमा महाप्रभु स्वयंद्वारा जारी ताम्रपत्र यसप्रकार रहेको छ ः
बालतपसी १०८ स्वामी हंसानन्द गिरी कस्य पत्रम्
यस तपोभूमि स्वर्गद्धारीमा १९५२ साल वैशाख पूर्णिमाबाट मैले स्थापना गरेको अखण्ड यज्ञ आजसम्म जसरी चली आएको छ । मेरा शेषपछि यसमा कुनै काम खण्डित हुनाकन नदिई यज्ञको काम चलाउनु । यस आश्रममा आएर जसले निष्ठापूर्वक सन्यास लिन्छ, त्यसैद्वारा ज्येष्ठताको आधारमा यहाँको महन्त बनी गरी आयाको अर्वपर्व पूजा पाठ होम होमादि साधु अभ्यागत समेतको रेखदेख गरी काम चलाउनु । यज्ञ चलाउनको लागि मैले झोलीको पैसाबाट चेलाप्रचेलाहरुका नाउँमा खरिद गरिलियाको दाङ देउखुरीका जग्गाहरु छन् । सोही जमीनको आयस्ताले काम चल्ने छ । कुनै विघ्नबाधा पर्न आएमा सरकारमा जाहेर गर्नु । यस यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन गएमा राष्ट्र तथा विश्वमा नै भारी भयानक हुनेछ । सो जानी मेरा शिष्य प्रशिष्यले आफूले यहाँको नियम पालना गरी यज्ञको काम चलाउनु अस्तु.....।
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च बसुन्धराम् ।
षष्ठीवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमि ।।
(नेपालीमा अर्थ ः आफूले वा अरुले दान गरेको भूमि जसले हरण गर्छ, उसले साठी हजार वर्षसम्म विष्टा (नरक) को कीरा भएर जन्मनु पर्छ । इति सम्वत् १९९६ साल माघ सुदि रोज २ शुभम् ।)’
यसविपरित कार्य हुनाले आश्रमको संचालनमा अभाव र समस्या पर्ने गरेको छ । समयानुकूल आश्रमको चलअचल सम्पत्तिको वैकल्पिक, बहुउपयोगी र आकर्षक मुनाफामूलक क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गरी अघि बढ्नु जरुरी देखिएको छ ।
स्वर्गद्वारीको विकासका लागि नया“ शिराबाट सोच्न र ठोस गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । त्यसनिम्ति स्वर्गद्वारीको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको रक्षा गर्दै आश्रमलाई परम्परागत प्रशासनिक जकड र प्रभुत्वबाट मुक्त गरी जनताको सहभागितामूलक संयन्त्रमार्फत् सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको आम्दानीबाट अनुत्पादक रुपमा ठूलो धनराशी खर्च गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ । आश्रमस“ग सम्बन्धित योगी–सन्यासीहरुलाई त्यही“ सम्मानपूर्वक बस्ने तथा योग–ध्यान र चिन्तनमनन गर्ने सुविधाजनक वातावरण बनाउनुपर्छ । योग्य पुजारी नियुक्त गरी तलबमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसलाई धार्मिक चिन्तक र योगीहरुको केन्द्रका रुपमा विकसित गरिनुपर्दछ । तबमात्रै देश–विदेशका ठूला–ठूला साधु–सन्त, योगी, ऋषि र महर्षिहरु आएर योग–ध्यान तपस्या गर्न सक्दछन् । जसरी पशुपतिनाथको विकासका लागि राज्यको ठूलो धनराशी खर्च गरिएको छ, पश्चिम नेपालको एउटा महत्वपूर्ण धार्मिकस्थलका हैसियतमा स्वर्गद्वारीको विकास गर्न राज्यले उल्लेखनीय नेतृत्व, प्रयास र लगानी गर्नुपर्छ । स्वर्गद्वारीको पूर्वाधार विकासको कामलाई मुख्यतः नेपाल–भारत सरकारको संयुक्त प्रयासमा अघि बढाउनुपर्दछ । किनभने, अहिले पनि स्वर्गद्वारी आश्रममा आउने तीर्थयात्रीहरुमा भारतको विहार–उत्तर प्रदेशका हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको संख्या सबभन्दा ठूलो रहेको तथ्यांकले देखाउ“छ । पं. नारायणप्रसाद पोखरेलको अगुवाईमा दाङमा महायज्ञमार्फत् संकलित करिब ६८ लाख रुपिया“ले घोराही–स्वर्गद्वारी सडकको ट्रयाक बनेको थियो, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो ग्राभेल र पक्की गरिनुपर्छ । यस्तै, भालुवाङ–चकचके–रोल्पा सडक ग्राभेल र कालोपत्रे भएको छ । हामीले पहल गरी २०६६ सालमा बनेको भिंगृ–स्वर्गद्वारी सडकलाई धरमपानीसम्म सडक पक्की गर्ने काम अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
प्यूठानको स्वर्गद्वारीलाई मुस्ताङको मुक्तिनाथस“ग जोडेर विशेष ‘सा“स्कृतिक–करिडर’ निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका निम्ति भिङ्ग्री–विजुवार–मच्छी–ठूलाबेसी सडकलाई बाग्लुङको भीमगिठे हुँदै कालीगण्डकी करिडरमा जोड्ने कामलाई राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत नै अघि बढाउनुपर्छ । यस सडकबाट बेनी–मुस्ताङ हु“दै तिब्बतको लोमान्थाङ कोरलासम्म छिट्टै सडक सञ्जाल विस्तार र संचालन हुन्छ । जो नेपाललाई भारत र चीनस“ग जोड्ने नया“ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक र सांस्कृतिक मार्ग बन्नसक्छ । यस सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्गमा झिमरुक नदीको उद्गमस्थल गौमुखी, जैविक विविधतायुक्त ढोरपाटन र प्राकृतिक औषधालयका रुपमा चिनिने तातोपानीकुण्ड, म्याग्दीलाई समेत समेट्न सकिन्छ । साथै, सालझण्डी–सौतामारे–ढोरपाटन सडकखण्ड कालोपत्रे गरेर कृष्णनगर र सुनौली नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय र अन्य पर्यटकहरुको स्वर्गद्वारी गन्तव्यलाई सहज बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा पूर्वी नेपाल र राजधानीबाट स्वर्गद्वारी जानेहरुलाई समेत सुविधा हुन सक्दछ । यसरी सडक पूर्वाधारको निर्माणमा ध्यान दिने हो भने स्वर्गद्वारीको धार्मिक–सांस्कृतिक महिमा स“गस“गै यसको पर्यटकीय विकास गर्न पनि सम्भव हुन्छ । तत्पश्चात् मध्य पहाडी जिल्ला प्यूठानका बासिन्दाहरु रोजगारी र जीविकाका लागि भारतको दिल्ली, पञ्जाब तथा खाडी मुलुकको कष्टसाध्य मजदुरीमा जानुपर्ने विद्यमान नियतीको अन्त्य गर्न सकिन्छ । र, आफ्नै थलोमा रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय र पर्यटन विस्तारको ढोका खोल्न सकिन्छ ।
भिङ्गृबाट स्वर्गद्वारा पुग्ने ‘ट्रेकिङ–रुट’लाई व्यवस्थित गरेर धार्मिक भावनाद्वारा पे्ररित तीर्थालुहरुलाई पैदल नै स्वर्गद्वारी पुग्ने स्थिति अझ सहज बनाउन सकिन्छ । यस्तै, त्यहा“ पुग्ने मोटरबाटो निर्माणको अधुरो प्रयासलाई समेत कालोपत्रे पूरा गरेर स्वर्गद्वारी पुग्न सहज बनाउन सकिन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, भिङ्गृदेखि स्वर्गद्वारीसम्म केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । आश्रम र स्थानीय जनता र समुदायको सहभागितामा त्यसको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनुपर्छ । जहा“, स्वर्गद्वारी आश्रम, स्थानीय वासिन्दा, केबुलकार कम्पनी र राज्यले संयुक्त लगानी गरी आकर्षक प्रतिफल हासिल गरेर आम्दानी बढाउन सक्छन् । यातायात, सञ्चार, होटल–रिसोर्ट, खानेपानी आदिको समुचित व्यवस्था गर्दै समग्र पूर्वाधार विकास गर्नसक्ने हो भने स्वर्गद्वारी आश्रमले मुलुककै राष्ट्रिय आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने प्रचुर सम्भाव्यता रहेको छ । यसको सदुपयोग गरी विश्वविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, जैविक पार्क, विद्यालय र बृद्धाश्रमहरुसमेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अझ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पशुपतिनाथ र स्वर्गद्वारीस“ग समन्वय गरी दाङको उर्बर फा“टबाट स्वर्गद्वारी तपोस्थलमा सार्न सकिन्छ । र, आयुर्वेदिक एवं संस्कृत विश्वविद्यालयको सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ । यसका निम्ति जनस्तरबाट समेत ठोस पहल र प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको आध्यात्मिक र धार्मिक रुपमा मात्रै विकास गरेर पुग्दैन, यसको धार्मिक–पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई देखेर विकासको ठोस प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्दछ । उल्लिखित तमाम कामलाई सुव्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन प्यूठान र दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित हालको सञ्चालक समितिले नेतृत्व गर्न सक्दैन । अधिकारसम्पन्न स्वर्गद्वारी विकास बोर्ड वा कोष नै गठन गरी नया“ संयन्त्रमार्फत सम्भावनाको खोजी गरेर अघि बढ्नेतर्फ राज्यले तत्काल आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । स्वर्गद्वारीको स्वामित्वमा रहेको भूमि सम्बन्धमा कायम विवादको अन्त्य गर्दै भौतिक पूर्वाधार र पर्यटकीय सम्भावनाको विकास गर्नेतर्फ ठोस प्रयास अघि बढाउनुपर्दछ ।
स्वर्गद्धारी आश्रमबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु गरी विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका १४ मध्येका नेपालमा अवस्थित ८ मध्ये ३ वटा उच्च हिमशिखरको दृश्वालोकन गर्न सकिन्छ । माछापुच्छ«े र निलगिरीसमेत देख्न सकिन्छ । यस स्थितिको व्यवसायिक रुपमा आश्रमको पूर्वी उत्तर मोहडामा टेलिस्कोप राखी दृश्वालोकनको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । यसबाट आश्रमले नयाँ आम्दानी समेत गर्नसक्दछ ।
लुम्बिनीपछि स्वर्गद्वारी आश्रम सिंगो प्रदेश नं ५ को महत्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्यका रुपमा स्थापित छ । यद्यपि लुम्बिनी र स्वर्गद्वारीको फरकफरक धार्मिक मत र सांस्कृतिक मान्यताका साथ तर एउटै उद्देश्य – विश्व शान्ति स्थापनार्थ विशेष महिमा रहेको छ । लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना ४० वर्षदेखि कार्यन्वयनमा रहेको छ र लुम्बिनी विकास कोषसमेत क्रियाशील छ । स्वर्गद्वारी विकासका खातिर यस्तो कुनै संरचना छैन् । तथापि, गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । गुरुयोजनाको पछिल्लो आधार स्वर्गद्वारी परिक्रमा मार्ग हो, जसले आसपासका भूगोल र जनजीवनलाइ दीर्घकालीन रुपमा स्वर्गद्वारीको विकास, प्रगति र प्रतिफलसँग आबद्ध गर्नसक्ने छ । यस निम्ति निम्न बमोजिमको परिक्रमा मार्ग निर्माण गरिनुपर्दछ ः
- भिंगृकोट विद्यालय
- तापे र सिम्ले
- जुगेनाको तल्लो भाग
- कालीपोखरी चौतारी
- दाबाङ भलाइडाँडा विदालय
- टार माथिल्लो भाग
- खुर्पीखोला किनार
- लिब्जा तल्लोभाग
- जोगीमारा तल
-् भिंगृकोट धर्मशाला र
-् आरम्भबिन्दु ।
यस परिक्रमा मार्गले स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं १, २, ३, ४, ८ र ९ लाई परस्पररमा आबद्ध गरी विकासको प्रतिफल र पहुँच स्थानीय समाज र जनसमक्ष पु¥याउन सक्नेछ । यसका बिन्दुहरुमा बहस छलफ गरी विस्तृत परियोजना तयार गरिने छ ।
प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ हिन्दु र बौद्धिमार्गी तीर्थयात्रीहरु पुग्ने विशेष गन्तव्यका रुपमा प्रसिद्ध रहेको छ । समुन्द्र सतहदेखि ३,७१० मिटर उचाईमा नेपालको हिमालपारीको जिल्लाका रुपमा अवस्थित मुस्ताङमा मुक्तिनाथ मन्दिर अवस्थित छ । मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्ड भारतबाट आउने पर्यटक र श्रद्धालुहरुका लागि विशेष आकर्षण मानिन्छन् । बौद्धमागीहरुले यसलाई छुमिङ ग्यात्सा अर्थात सयपानी भन्दछन् । लुम्बिनीबाट निर्माणधीन कालीगण्डकी करिडोर र सालझण्डी–ढोरपाटन सडकमार्ग तथा स्वर्गद्धारीबाट कृष्णसेन–आश्रित प्रादेशिक सडक कोइलाबास–कोरला सडक हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने पूर्वाधार निर्माणधीन रहेका छन् । भविष्यमा भैरहवा–जोमसोम, स्वर्गद्धारी–जोमसोम सिधा हवाइ उडानको संभावनासमेत रहेको छ ।
कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्रामको लागि पनि यो तीर्थस्थल बढी प्रसिद्ध रहेको छ । शालिग्रामलाई भगवानका रुपमा पूजा गर्ने गरिन्छ । यो स्थल बैष्णव सम्प्रदायको समेत विशेष तीर्थस्थल हो । विकट र हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित मुक्तिनाथ क्षेत्रलाइ हिन्दु र बौद्धहरु गरी संसारभरको ३ अर्ब जनसंख्याको साझा गन्तव्यका रुपमा प्रबद्र्धन गरिनुपर्दछ । स्वर्गद्धारी आउने हिन्दुहरु र लुम्बिनी आउने बौद्धमार्गीहरुलाई सडक र हवाइ यातायातमार्फत मुक्तिनाथ पुग्न, दर्शन गर्न, खानबस्न र यातायातको सहज एवं व्यवस्थित प्रबन्ध मिलाउने हो भने यो विशेष सांस्कृतिक र धार्मिक आकर्षणको गन्तव्य हुनसक्दछ । लाखौं पर्यटकहरुको यहाँ ओइरो लाग्न सक्दछ ।
पर्यटन विकासको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र शिकार आरक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुने निश्चित छ । यस हिसावले गौमुखी आसपासको संरक्षित क्षेत्र, जलजला क्षेत्र, मदाने संरक्षण क्षेत्र, गौमुखी संरक्षित बन र देशको एकमात्र ढोरपाटन शिकार आरक्षले यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासको लागि विशेष योगदान गर्नसक्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ । यसका लागि पूर्वी रुकुम, म्याग्दी र बाग्लुङ जिल्लामा अवस्थित यसको क्षेत्रफल १,३२५ वर्ग किमी रहेको छ । २०४० सालमा ढोरपाटन शिकार आरक्ष घोषणा गरिएको थियो । समुन्द्री सतहबाट २,८५० देखि ५,४०० मिटरको उचाइमा यो अवस्थित छ । यहाँ नाउर, झारललगायतका जनावरको व्यवसायिक शिकार गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पौराणिक र ऐतिहासिक कालदेखि धार्मिक भावनाले स्थापित तपोभूमिका रुपमा रहेको रेसुङ्गा अहिले राम्रो पर्यटकीय स्थलको सम्भावना बोकेर संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण र विकासको पर्खाइमा रहेको छ ।
चौबिसे राज्यका चार राज्यहरु गुल्मी, धुर्काेट, मुसीकोट र इस्मा अहिले गुल्मीमा पर्दछन् । स्वामी शशीधरले पृथ्वीनारायण शाहसँग वि.सं १८२६ सालतिरै काठमाडौं आउँदा भेट गरेका थिए । त्यस भेटमा उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई सबै जातजातिलाई समान दृष्टिले हेर्न र तदअनुकूल व्यवहार गर्न सल्लाह दिएको बताइन्छ । त्यही सल्लाहबाट प्रेरित भएर नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल चार वर्ण छत्तिस जातको पूmलबारी हो भन्ने दिव्योपदेश बोलेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहसँग उनको वि.सं १८३१ सम्म नै संगत रह्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहको देहावसानपछि शशीधर स्वामी फर्केर आफ्नो पैतृक आश्रम रेसुङ्गामै बसे । उनी त्यहाँ बस्नुपर्ने विशेष कारण थियो । त्यतिबेलासम्म गण्डकी पश्चिमको नेपाल एकीकरण भएको थिएन । उनले नेपाल एकीकरण अभियानलाई रेसुङ्गामा बसेर नै मद्दत पु¥याए । अर्थात त्यतिबेला राजनीतिक तथा सैनिक केन्द्र काठमाडौं थियो भने एक प्रकारले वैचारिक केन्द्रजस्तो रेसुङ्गा थियो, जसकोे नेपाल दरबारसँग गहिरो सम्बन्ध थियो । दरबारका भारदारहरु शिक्षा–दीक्षाका लागि रेसुङ्गा पुग्ने गर्दथे । स्वयम् श्री ५ रणबहादुर शाह जोसमनी सन्त परम्पराबाट अत्यन्त प्रभावित भई शशीधर स्वामीबाट दीक्षित बनेर स्वामी निर्वाणानन्द बनेका थिए । रणबहादुर शाहसँग गुल्मी दरबारकी राजकुमारी, राजराजेश्वरीदेवीलाई विवाह गराउने संयोग पनि स्वामी शशीधरले नै पाएका थिए, जो पछि नेपालको राजनीतिमा अहम् भूमिका खेल्ने बडामहारानी राजराजेश्वरीदेवीका रुपमा चर्चित बन्न पुगिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाका भाई जनरल रणवीरसिंह थापाले रेसुङ्गामा बसेर बाह्र वर्षसम्म विद्या आर्जन गरी स्वामी अभयानन्द बनेका थिए ।
अर्थात आजको रेसुङ्गाको तत्कालीन महत्व अहिले सतहमा देखिएको छैन । रेसुङ्गाको तत्कालीन संरचना बीचमा खरानी भयो । २००७ सालमा राणाशासनको विदावारीपछि २००९ सालमा रेसुङ्गाको दक्षिण–पश्चिम काखमा रहेको तम्घासमा गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम सार्ने निर्णय भयो । त्यसबाट रेसुङ्गामा बसिरहेका यदुकानन्द प्रभुले आफ्नो अपमान भएको ठाने । फलस्वरुप उनले आफू बस्ने आश्रम र धर्मशाला सबैतिर आगो लगाएर यज्ञशालाभित्र रहेको विशाल होमखाडीमा कैयौं बहुमुल्य बस्तुहरु हवन गरे । यो २०११ सालको कुरा थियोे । त्यसपछि उनी बाहिर ताला लगाएर त्यहाँभित्रै बस्न थाले । यदुकानन्द प्रभु काठमाडौं कलंकी निवासी गोकुलानन्द रिजालका छोरा थिए । उनी दरबारभित्र पूजारी थिए । तर आफ्नी पत्नीको मृत्यु वियोगबाट विरक्तिएर घुम्दै गुल्मेली ठेक्का रजौटा धैरेनीका राजा चिरञ्जीवी शाहको दरबारमा पुगेका थिए । राजा चिरञ्जीवीको सल्लाहअनुसार नै उनी रेसुङ्गामा प्रभु बनेर बस्न राजी भए । राजा चिरञ्जीवीकी फुपु जुद्धशम्शेरकी रानी थिइन् । त्यही संयोगका कारण यदुकानन्दलाई जुद्धशमशेरबाट अकूत धनसम्पति पनि उपलब्ध हुन थाल्यो । त्यसबाट सुरुमा सामान्य कुटी बनाएर बसेका यदुकानन्दको तीन तल्ले तामाको छानो र सुनको गजुर भएको यज्ञशाला बन्यो, जो अहिले पनि छ । साथै, उनको आश्रममा होमखाडी, कृष्ण मन्दिरआदि बने । उनको गद्दी त पाँचसय तोला चाँदीको नै बन्यो । एकसय वटा असर्फीको माला, बत्तीस तोला सुनले मोडेर बनाइएको गौमुखी रुद्राक्ष माला, बेलायतबाट झिकाइएको रेशमी पिताम्बर पहिरन, तामदाममा सुनको गजुर भएको झल्लेरी छाता ओढाएर अहोरात्र, भजनकीर्तन, हार्माेनियम र ग्रामोफोनको संगीत गुञ्जाएर यदुकानन्द आश्रमलाई मानिसहरुको अत्यधिक भक्ति–भावनाको केन्द्र बनाउथें । राणा शासनको अन्त्यपछि उनले पाउने आर्थिक सहयोगमा कटौती भयो । र, तम्घासमा सदरमुकाम राखेपछि रिसले चूर भई उनले आफ्नो वैभवशाली आश्रमलाई नै खरानी पारे । २०१६ सालमा राजा महेन्द्रका साथ गुल्मी पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला पनि यदुकानन्दको दर्शन गर्न रेसुङ्गा पुगेका थिए । तर रिसले आगो भएर बसेका उनले बीपीलाई आफ्नो सर्वाङ्ग नाङ्गो रुप देखाइदिएका थिए । २०२१ सालसम्मको रेसुङ्गाको सम्पूर्ण ऐतिहासिकतालाई डढाएर उनी काठमाडौं फर्के । र, २०२८ सालमा पशुपति धर्मशालामा उनले देहत्याग गरे ।
रेसुङ्गा तम्घास उपत्यकालाई उत्तर–पूर्वबाट अङ्कमाल गरेर नेपालका केही ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक स्थल तथा संरचनाहरुलाई शिर र काखमा राखी बसेको पर्वत–शृङ्खलाको नाम हो । समुद्र सतहदेखि ७ हजार ४ सय फिट उचाइ र तीन हजार चार सय हेक्टर भू–भागमा यो ऐतिहासिक स्थल फैलिएको छ । तल्लो भागमा गुल्मीका तम्घास, अर्खले, पराल्मी, बलीथुम, जुभुङ्ग, गौडाकोट, दरबार–देवीस्थान, दुबीचौर, सिमीचौर, हस्तीचौर, बडागाउँ गरी ११ गाउँहरुले यसलाई घेरेका छन् । रेसुङ्गालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा खासगरी धार्मिक पर्यटकीय धामको रुपमा विकास गर्ने सम्भावना निकै व्यापक छ । एक त यो नेपाल एकीकरणकालदेखि नै चर्चित रहँदै आएको स्थल हो । साथै, प्राकृतिकरुपमा पनि अत्यन्तै मनोरम रहेको हुँदा यसले विराट संभावना र उज्यालो भविष्य बोकेको छ ।
रेसङ्गा क्षेत्रबारे अझ राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने तानसेन, रुरु क्षेत्र, श्रृङ्गेश्वर हुँदै गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास र त्यसको पश्चिमपट्टि धुर्काेटमा रहेको बिचित्र गुफा भएर प्यूठानको गौमुखी र स्वर्गद्धारीसम्मलाई समेटेर पर्यटन क्षेत्र विकासको फराकिलो गुरुयोजनाभित्र राख्न र तदनुरुप पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । अर्काेतिर रेसुङ्गाबाट बाग्लुङ्गको ढोरपाटनसम्मको एउटा सिङ्गो क्षेत्रलाई त्यस गुरुयोजनाभित्र समेटेर लुम्बिनी–रेसुङ्गा–स्वर्गद्धारी–गौमुखी–ढोरपाटन र मुक्तिनाथ (मुस्ताङ) सम्मलाई एउटै विशेष गुरुयोजनाअन्तर्गत विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले व्यापक र दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । तम्घासदेखि धुर्काेटको विचित्र गुफा र त्यसलाई प्यूठानको मच्छीसम्म जोड्ने धुर्काेट–पुर्काेटदह–सौतामारे–मच्छीसम्म व्यवस्थित सडक निर्माणलाई अगाडि बढाउनेपट्टि विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अर्घाखाँचीको हंसपुरमा अवस्थित बामरुक र त्यहाँ अवस्थित नरसिंहस्थान, अर्घास्थित काली भगवतीको ऐतिहासिक मन्दिर, विकट घेराको लेक, प्रसिद्ध सुपा देउराली तथा त्यस क्षेत्रको शैक्षिक जागरणको केन्द्र हरिहर संस्कृत पाठशाला अवस्थित खिदिमलाई समेत धार्मिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने ढोका खोल्न सकिन्छ ।
वर्तमान रेसुङ्गाप्रति अवश्य व्यापकरुपमा जनचासो बढेको छ । खासगरी यदुकानन्द प्रभुको पलायनपछि एक कालखण्डमा बेवारिसे रुपमा रहन पुगेकाले त्यहाँका बहुमूल्य साँस्कृतिक सम्पदा, बनस्पति तथा बन्यजन्तु र दुर्लभ जडिबुटीहरुमाथि व्यापक अतिक्रमण भएको विदितै छ । यस अगाडिका जनप्रतिनिधिहरुले रेसुङ्गाको स्थिति र संभाव्यताप्रति सरोकार देखाएनन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको संसद्को पाँचौ अधिवेशनपछि हरेक अधिवेशनमा सांसद्हरु सिद्धिनाथ ज्ञवाली, कमलराज श्रेष्ठ र टंकप्रसाद पोखरेलले रेसुङ्गाको साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धमा आवाज उठाउने गरेको सन्दर्भ यहाँनेर विशेष स्मरणीय छ । सांसद सिद्धिनाथ ज्ञवालीले संसद्को पाँचौ अधिवेशनमा रेसुङ्गाको सम्बन्धमा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जनस्तर र जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट रेसुङ्गाको इतिहास, संस्कृति, वनजंगल र बन्यजन्तुको संरक्षण–सम्बद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गर्ने काम निरन्तर रुपमा हुँदै आयो । अहिले त्यसको संरक्षणका लागि रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र पर्यटन विकास समिति समिति र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुसमेत बनेका छन् । तैपनि सरकारको अझै पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । खासमा रेसुङ्गा सरकारको ठोस र उचित ध्यानाकर्षण तथा व्यवस्थापन एवम् योजनाबद्ध विकास र लगानीको पर्खाइमा रहेको छ ।
धेरै हिसाबले रेसुङ्गाले गुल्मी जिल्लाको मात्र नभएर मुलुककै एउटा गौरवपूर्ण इतिहास, सँस्कृति तथा आध्यात्मिक चिन्तनको वैभवशाली परम्परालाई बोकेको छ । यसको ऐतिहासिक महत्वलाई अझै अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्न त बाँकी छ । तैपनि गुल्मीका तत्कालीन तीन जना सांसदहरुले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रयाश थालनी गरेर रेसुङ्गा नामक एउटा विवरणात्मक पुस्तिका प्रकाशन गरेको पाइन्छ । गुल्मी–२ र ३ का सांसदहरु कमलराज श्रेष्ठ र टंकप्रसाद पोखरेल(२०५१) तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद सिद्धिनाथ ज्ञवालीले गरेको यो प्रयास निकै प्रशंसनीय छ । आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र, इलाका र भेगमा पर्ने ऐतिहासिक पर्यटकीय र साँस्कृतिक सम्पदाको विकासमा सांसदहरुले अघि बढाउने यस्ता प्रयासबाट बौद्धिक र आम जनमतमा यस्ता सम्पदाहरुलाई परिचित गराउन योगदान पुग्नसक्दछ । यो त्यसैतर्फ परिलक्षित पहिलो उदाहरणीय प्रयाश रहेको स्पष्ट छ । (बुधबार साप्ताहिक बर्ष, ९ असोज २०५३)
हाल सरकारीस्तरमा रुरु–रेसुङ्गा विकास समिति बनेको छ । त्यसले सरकारी बजेटबाट विभिन्न निर्माण कार्य गरिरहेको छ । रेसुङ्गाको काखमा रहेको सिमीचौरमा एयरपोर्ट निर्माणाधीन छर परीक्षण उडान भइसकेको छ । तानसेनदेखि तम्घाससम्म ७५ किमी लामो मोटरबाटो पक्की भएको छ । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासदेखि अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्कसम्म जोड्ने कच्ची सडकसमेत चाँडै कालोपत्रे हुने क्रममा रहेको छ । रेसुङ्गा विकास समिति नामक छुट्टै जनस्तरीय समितिले पनि त्यहाँ विभिन्न निर्माण कार्य गरिरहेको छ । रेसुङ्गाको विकासमा रुरु–रेसुङ्गा विकास समितिको गठन र सिमीचौरमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न विशेष भूमिका खेल्नुहुने पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कोटीहोम यज्ञ गराई रेसुङ्गाको पुनरोत्त्थान गराउन र गौशाला बनाउन भूमिका खेल्ने योगी नरहरिनाथ र महायज्ञ गरेर रेसुङ्गाको विकासका लागि जनस्तरबाट स्रोत जुटाइदिने वाचनशिरोमणी पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेल तथा रेसुङ्गा विकास समितिका पदाधिकारीहरुको योगदान स्मरणीय र प्रशंसनीय छ ।
राप्ती नदीको एक हिस्सा झिमरुक नदीको उद्मगस्थल हो– गौमुखी । अर्खा, ठूलाचौर किनामबाट अगाडि बढेपछि पुगिने गौमुखीको ऐतिहासिक, पर्यावरणीय र सांस्कृतिक महत्व व्यापक रहेको छ । तर दुर्गम अवस्थितिका कारण पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव छ । माघे संक्रान्तिमा मेला लाग्ने गौमुखीमा २०६६ सालमा करिब ३० हजार आन्तरिक पर्यटक पुगेका थिए । सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको ‘मदाने–पञ्चासे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत गौमुखी पर्दछ । माघे संक्रान्तिको मेलामा तीर्थालु÷दर्शनार्थीहरू नुहाउ“छन्, परेवा, कलम÷ध्वजा आदि चढाउ“छन् र आ–आफ्नो इच्छा पूरा होस् भन्ने चाहन्छन् । गौमुखीमा सामान्य मन्दिर पनि रहेको छ ।
समुद्र सतहबाट १५००–२५०० मिटरको उचाइअन्तर्गत पर्ने गौमुखी क्षेत्र खासमा २१०० मिटर उचाईमा रहेको छ । प्यूठानको उत्तरी भेगमा पर्ने दुर्गम गाउ“ अर्खामा अवस्थित यसको पूर्वमा गुल्मी, उत्तरमा बाग्लुङ र पश्चिम–दक्षिणमा प्यूठानका अरू गाउ“हरू पर्दछन् । यो क्षेत्र नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ, जहा“ सबैभन्दा धेरै पारिस्थितिक प्रणालीहरू तथा प्राणीहरूको पनि विविधता रहेको पाइन्छ । मुलुकको कूल जङ्गलको ३२ प्रतिशत जङ्गलमध्ये पहाडी क्षेत्रमा रहेर ५२ प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई ओगटेको छ । जबकि सरकारले ३३ वटा इको–सिस्टमलाई मात्र संरक्षण गर्न सकेको पाइन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा ११० जातका स्तनधारी जीवजन्तु र ६९१ जातका चराहरू पाइन्छ । तीमध्ये यो एउटा महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हुनसक्छ । किनभने, पञ्चासे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको अध्ययन अनुसन्धान प्रक्रियालाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफा“टा आरक्षणस“ग समन्वय गरी अघि बढाउन प्रयास अघि बढाएको छ । यस क्षेत्रमा डा“फे, मुनाल, चिर, कालिज र गिद्धहरू पाइने स्थिति छ । यो क्षेत्र जडिबुटीका लागि पनि अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । करिब डेढ सय वर्ष अघि बाग्लुङ, निसीका तगारा बुढामगर (निसेल) ले भैंसी चराउ“दा गौमुखीको १२ मिटर लम्बाई, ६ फिट चौडार्इं र ७ मिटर उचाई क्षेत्रफल रहेको गुफा भेटेका थिए । त्यसलाई उनले गाईको मुखजस्तो पत्थरको आकारबाट पानी आएको दृश्यको आधारमा गौमुखी नामाकरण गरेको भनिन्छ । त्यही गुफाबाट पानी निस्केपछि झिमरुक नदीका रूपमा प्रवाह सुरु हुन्छ । त्यसकै बाहिर सामान्य मन्दिर रहेको छ । मन्दिरमा सन्तानको प्रगति र ऐश्वर्य बृद्धि आदि मनोकामना पूरा गर्न दुधको धार, पशुपक्षीको दाम्लो चढाउने र परेवा उडाउने गरिन्छ । मध्यपहाडी प्रकृति र स्थानीय मगर संस्कृतिको संयोजन गरेर गौमुखीलाई आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । हाल अर्खा, अर्तुबाङबाट पैदल हि“डेर गौमुखी पुग्न सकिन्छ । बाग्दुला, ठूलावेसी–भीमगिठे त्रिदेशीय सडक निर्माण पूरा गरी यसलाई निकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । लालीगुरा“सले भरिएको यहा“को घनाजङ्गलमा पाइने गुलावी रङको गुरा“स विशेष आकर्षण बन्ने देखिन्छ । यहाँ मगर संग्राहलय र होमस्टे संचालनको प्रयास अघि बढेको छ ।
पर्या–पर्यटनको दृष्टिले प्यूठानको स्याउलीबाङ्को नौबहिनी कोठीभीर क्षेत्र जिल्लाकै सबैभन्दा उचाइमा अवस्थित र आकर्षक रहेको छ । उत्तरमा धौलागिरी हिमाल हा“सिरहेको कोठीभीर स्वयम्मा जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रसमेत हो ।
साविक स्याउलीबाङ् गाविसको वडा नं. ५, ६ र ७ स“ग जोडिएको कोठीभीर पुग्न गाउ“बाट करिब ५ घण्टा उकालो र तेर्सो पदयात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब ३ हजार ६ सय ५९ मिटर उचाइमा रहेको यस क्षेत्रमा मंसिरदेखि फागुनसम्म हिउ“ जम्ने गर्दछ । र, यहा आउने पर्यटकहरू हिउस“ग लुकामारी खेल्न सक्दछन् ।
कोठीभीर आसपासमा स्याउलीबाङ्को परम्परागत जनजीवनस“ग अभिन्न रूपले गा“सिएको गाई÷भैंसी तथा भेंडीगोठ हेर्न पनि सकिन्छ । जहा“ अझै २÷३ सय गाईभैंसी र करिब ४ सयको संख्यामा भेंडी रहेको पाइन्छ । पशुपालनलाई पर्यटन, प्रबद्र्धन र जीविकोपार्जनमूलक पेशा दुबै उद्देश्यस“ग आबद्ध गरी अघि बढाउन सक्दा यो स्थानीय जनताको महत्वपूर्ण माध्यम सावित हुनसक्दछ ।
परम्परागत मगर गाउ“ स्याउलीबाङ्लाई प्रकृतिले जति सुन्दर अवस्थितिमा सिंगारेको छ । यहाँ त्यत्तिकै प्रचुर सम्भाव्यता रहेको छ– मगर जीवनशैली र संस्कृतिआधारित पर्यटन विकासको । यसनिम्ति गाउ“मा व्यवस्थित ‘होेम–स्टे’ संचालन गर्नुपर्दछ । लुङ्को बाहनेदेखि स्याउलीबाङ, नौबहिनी् र कोठीभीरसम्मको पदयात्रा–मार्ग विकसित गर्नसक्दा स्याउलीबाङ् प्रकृति र संस्कृतिआधारित ग्रामीण पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बन्नसक्छ । यसनिम्ति त्यहा“का अगुवाहरूले अविलम्ब पहलकदमी अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
रोल्पाको लिवाङबाट ५ किमी उत्तरतर्फ ९९० देखि ३,२९५ मिटरको उचाइमा प्यूठान, बाग्लुङ र पूर्वी रुकुमसम्म फैलिएको जलजला क्षेत्रको जैविक तथा पर्यावरणीय महत्व निकै उच्च रहेको छ । साविकको कुरेली, मिरुल, थवाङ उवा, गाम, सेरम, जैमकसला, ह्वामा, जंकोटआदि एक दर्जन गाउँ विकास समिति, जो हाल वडाहरु भएका छन्, तिनमा नै यो क्षेत्र फैलिएको छ । प्रसिद्ध सुन छहारी झरनासमेत यस क्षेत्रमै रहेको छ । हस्तान्तरण भइसकेको ५,९३४.८ हेक्टर तथा कवुलियती १०२.७ हेक्टर वनक्षेत्रमा जलजला क्षेत्र अवस्थित छ । टिमुर, चिराइतो, सुगन्धकोकिला, पाँचऔले, कुट्की, गुच्छीआदि जडीबुटी एवं रेडपाण्डा, भालु, चितुवा लगायतका जनावर यहाँ पाइन्छन् । यस क्षेत्रसँग ढोरपाटन शिकार आरक्षसमेत जोडिएको छ ।
जलजला क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गरी ऐतिहासिक संघर्षभूमि थवाङलाई सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँ र प्रस्तावित गुरिल्ला ट्रेललाई संसारभर प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । साथै, यस क्षेत्रको जनजीवनसँग सम्बन्धित भई संसारका विभिन्न देशका अध्येताहरुले गरेका अध्ययनहरुलाई एकीकृत रुपमा संरक्षण र अध्ययनको प्रबन्ध मिलाएर मगर संस्कृति, मौलिक जीवनशैली र जीवनचर्चाको अध्ययन केन्द्रसमेत बनाउन सकिन्छ ।
आन्तरिक सहायक गन्तव्य
नेपालका गाउँघरमा विभिन्न देवीस्थान र देउरालीआदि रहेका छन् । देवताको स्त्रीलिङ्गी शब्दका रुपमा देवी प्रचलित रहेको पाइन्छ । भगवती, दुर्गा, चामुण्डा, गौरी, काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कालरात्री, बाराही, देउरालीआदि देवीका अनेक रुप मानिन्छन् ।
गोरुसिंगेबाट पत्थरकोट सडकखण्डमा ४७ किमीको दूरीमा अवस्थित सुपादेउराली प्रसिद्ध तीर्थस्थलका रुपमा विख्यात छ । परम्परागत रुपमा लाहुरे, वटुवा र विद्यार्थीआदि भक्तजनका चाहना सुपा देउरालीले पूरा गर्दैआएको विश्वास गरिन्छ । यहाँ २०४२ सालमा व्यवस्थित मन्दिर बनाइएको थियो । हाल प्यागोडा शैलीको सुन्दर मन्दिर रहेको छ । एकादशी, औंशी, पूर्णिमाबाहेक सबै दिन र विशेषतः शनिवारका दिन यहाँ भाकल चढाउन खुला गरिन्छ । सन्धिखर्क नगरपालिका–७ मा अवस्थित यस मन्दिरमा देशभरि र भारतका विभिन्न स्थानबाट हजारैं भक्तजनहरुको ओइरो लाग्दछ । दाङ र बाँके जिल्लासम्म समेत सुपादेउरालीका मन्दिर विस्तार गरिएका छन् ।
करिब चार सय वर्षअघि गुल्मेली राजा वीर शाहले गौविर्ता राखेको हाल अर्घाखाँचीको हंसपुर गाविसमा पर्ने वामरुकका दिशै शर्माका छोरा स्वामी शशीधर आजभन्दा दुईसय पचास वर्षअघि तपस्वी भएर यहाँ बसेका र जोसमनी सन्त सम्प्रदायका प्रमुखमध्ये एक व्याख्याता र प्रचारक रहेका थिए । जोसमनी सन्त परम्पराले विचारको व्यापक प्रचार–प्रसारको केन्द्र यसै ठाउँलाई बनाएको थियो ।
सन्धिखर्क सौतामारे सडक खण्डको भँडार देउराली वा टिमुरेबाट बायाँतर्फ लचगेर बामरुक र नरसिंहस्थान पुग्न सकिन्छ । तपोभूमिका रुपमा प्रसिद्ध नरसिहस्थानमा विभिन्न मन्दिर, पदमार्ग, बाटो र अन्य संरचनाहरु बनाई पर्यटकीय आकर्षणहरु थपिएका छन् ।
कंके देउराली/गुहारी ताल
मदाने गाउँपालिका गुल्मीमा अवस्थित कंके देउराली प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो । यहाँको वनजंगल, हरियाली र गुहारी खोलासम्म फैलिएको क्षेत्र मनमोहक छ । सालझण्डी–ढोरपाटन सडक खण्डमा सौतामारे नजिकै रहेको यस पवित्र स्थलमा नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत र अन्य निकायहरुले पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेका छन् । जंगल क्षेत्रको संरक्षण, देउरालीको दर्शन र पूजाआजामा आउने भक्तजनहरुको खानपान,बसोबास र मनोरञ्जनको सुविधा एवं दृश्वालोकनका निम्ति यहाँ योजनाबद्धढंगले अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरिनु अपरिहार्य छ ।
कंके देउरालीको विकास र यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न गुहारी खोलामा बाँध बाधेर कृत्रिम ताल निर्माण गर्नु निकै महत्वपूर्ण र आकर्षक योजना रहेको छ । गुहारी खोलामा करिव २ करोड ९० लाख लागतमा पहिले प्रस्तावित २० मिटर उचाइ र २० मिटर लम्बाइको बाँध बाँधी ३०० मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइ क्षेत्रफलको कृत्रिम बाँध बनउन सकिन्छ । यसो गर्दा करिब सात हजार स्थानीय बासिन्दालाई खानेपानी, हिउँदे खेतीका लागि सिंचाइ, मौसमी र बेमौसमी तरकारी र फलफूल खेती तथा मत्स्यपालनसमेत गरी आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुुधार एवं पर्यटकहरु आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस तालको निर्माणपश्चात् आकार सानो भए पनि आकर्षण निकै बढी हुने निश्चितप्रायः छ । यहाँ गर्मीयाममा दाङ, कपिलबस्तु र बुटवलबाट समेत शीतल, मनोरम दृश्यावलोकन र मनोरञ्जनका लागि पर्यटकहरु आउने क्रम बढेर व्यवसायिक रुपमा पर्यटकीय गतिविधिहरुबाट नयाँ माहोल सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले कंके देउराली र गुहारीतालको पर्यटन विकासमा उचित ध्यान पु¥याउनु आवश्यक रहेको छ ।
अर्घाखाँची, गुल्मी र प्यूठान जिल्लाको संगमस्थल सौतामारे सालझण्डी–ढोरपाटन सडक खण्डमा अवस्थित रमणीय गाउँका रुपमा रहेको छ । ग्रामीण चक्रपथ, पोखरी संरक्षण, कम्युनिटी लज आदिको व्यवस्थाद्वारा यहाँ ग्रामीण पर्यटनको पूर्वाधार तयार भइरहेको छ । दलित, जनजाती तथा ब्राम्हण र क्षत्रीहरुको मिश्रित जनसंख्या र बसोबास रहेको यो गाउँ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ मा अवस्थित रहेको छ । यहाँबाट कंकेदेउराली र गुहारीताल – गुल्मी (निर्माणधीन), नरसिंहस्थान (अर्घाखाँची) र कौछे, रकगार्डेन(प्यूठान)जस्ता आसपासका सहायक गन्तव्यहरु नजिकै अवस्थित छन् । यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण हिमश्रृखलाहरु नजिकै दाँतको जस्तै लहर मिलाएर उभिएका देखिन्छन् ।
तीन जिल्लाको संगमस्थल सानी पोखरीमा साझा संरचना निर्माण गरी एउटा छुट्टै आकर्षण बढाउन सकिन्छ । यसनिम्ति मालारानी, मदाने र झिमरुक गाउँपालिका र सम्बन्धित वडाहरुले सहकार्य गरी नेपालमै उल्लेखनीय संरचना बनाउनु पर्दछ । तीन जिल्लाको साझाबिन्दुका रुपमा यस्तो स्थान अन्यत्र बिरलै रहेको पाइन्छ ।
झिमरुक गाउँपालिका ४ कौछेमा वि.सं २००० सालमा पक्की इँटाद्वारा निर्माण गरिएको चर्चित ‘५५ झ्याले’ दरबार रहेको छ । खिमविक्रम सिंहले भक्तपुर र पाल्पाका सिकर्मी ल्याई निर्माण गरेको यस भवनको संरक्षण एवं विशेष रिसोर्टका रुपमा व्यवसायिक प्रवद्र्धन गर्न गाउँपालिकाको नेतृत्व, स्थानीय व्यवसायी र घरधनीहरुले संयुक्त रुपमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
झिमरुक ५ ढाँडमा अवस्थित ढुंग्यानलाइ रक गार्डेनका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट सूचिकृत १०० नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य मध्येमा यसलाई समावेश गरिएको छ । कोइलाबास–कोरला सडक खण्डमा अवस्थित रक गार्डेनको विकास र प्रवद्र्धनमा झिमरुक गाउँपालिका जुटेको छ ।
प्यूठानमा अवस्थित विभिन्न कोटहरुमध्ये गडी र ओखरकोट यस भेगका चर्चित कोट हुन् । ओखरकोटमा जाटकालीन राज्यका पुरातात्विक अवशेषहरु पाइन्छन् । हालै ओखरकोटको भीर छेडेर मोटरबाटो गडीकोटको उत्तरी मोहडाहुँदै बाँदीकोटसम्म पुगेको छ । यो आफैँमा अवलोकनयोग्य रहेको छ । ओखरकोट र गडीकोटमा दशैँको अवसरमा मेला लाग्दछन् । गडीकोटमा त दशैँको पूर्णिमाका दिन यस भेगकै विशाल मेला लाग्ने गर्दछ । यी कोटहरुमा पूर्वाधार निर्माणको काम अपेक्षाअनुरुप हुन सकेका छैनन् ।
झिमरुक गाउँपालिका ८ लिवाङ टिमुरचौर र गौमुखी गाउँपालिका.मा अवस्थित दबवै स्थानको महिमा उल्लेखनीय रहेको छ । स्नाथानमा कालीपाठीको बली दिने चलन छ भने झाँक्रीढुंगामा कालो बोका बली दिइन्छ ।
समुन्द्री सतहबाट २,२०० मीटर उचाइमा अवस्थित दहियाल्ना सुविधायुक्त हवाइ मैदान निर्माण गर्न सकिने राम्रोमैदान हो । यहाँ लालीगुराँस क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य २०६८ सालमै थालिएको थियो । तथापि ठोस योजना र बजेट विनियोजनको अभावमा थलिएजस्तो हुनपुगेको छ । यसको शिरका रुपमा रहेको मर्चुलधुरीबाट सिंगो प्यूठानको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यसलाई भविष्यमा ‘नेचुरल भ्यू प्वाइन्ट’का रुपमा विकास गर्ने संभावना रहेको छ ।
रिजाल ब्राम्हण र केसीहरुको देवालीस्थल लुङ र धनञ्जय गोत्रीय भण्डारीहरुको देवालीस्थल झुलेनी जिल्लाको निकै ठूलो जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने साँस्कृतिकस्थल रहेका छन् । नौबहिनी गाउँपालिकामा अवस्थित लुङको समावेशी देवाली विशेष चर्चित छ । नौबहिनी ८ र प्यूठान नगरपालिका ६ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने झुलेनी संरक्षण क्षेत्रको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माण समेत थालिएको छ । यसको महत्व बुझेर नौबहिनी र प्यूठान नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढाएका छन् ।
मल्लरानी गाउँपालिका ५ मा अवस्थित झाँक्रीस्थान खलंगामा र पालुकास्थान चुँजाठाटीमा अवस्थित छन् । दुबै धार्मिक स्थानको संरक्षण, विकास र प्रबद्र्धन गरिनु आवश्यक छ । मल्लरानी धुरीलाइ ‘नेचुरल प्वाइन्ट’ तथा पदयात्रा मार्ग र केवुलकारआदि पूर्वाधारले सुविधायुक्त र अझ रमणीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । कवि कृष्ण सेन इच्छुकको पुख्र्यौली गाउँ खैरा सराङकोटलाई समेत तदनुरुप विकास गर्न ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ ।
चन्द राजाहरुको दरबार अवस्थित यस क्षेत्रलाई विजुवारबाट पदमार्ग र सडक सञ्जालले जोडिएको छ । यसको ऐतिहासिक र पुरातात्विक एवं पर्यटकीय विकासमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । ढुंगेठाँटी, पुरनठाँटी, चुँजाठाँटी र घुम्नेठाँटीहरु भित्रीकोट र मल्लरानीको आसपासका चार सिमानामा अवस्थित छन् ।
प्यूठान नगरपालिका ५ जुम्रिकाँडा, ठूलोगाउँबाट उत्तर रोल्पातर्फ सिमामा अवस्थित यस लिस्ने भञ्ज्याङमा स्याउखेती, बाख्रापालन र अन्य व्यवसायिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । भविष्यमा यो सप्ताहान्तको मनोरञ्जनपूर्ण गन्तव्य बन्नसक्ने संभावना विद्यमान छ ।
सरुमारानी गाउँपालिका–४ मा अवस्थित ढुंगेगढी ऐतिहासिक गढी हो । पुरातात्विक र सांस्कृतिक संरक्षणका साथ गढी र दरबारको पुनः निर्माण र रानीकुवाको संरक्षणमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले २०÷२० लाख बजेट छुट्टाएर काम गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र बड्डाँडा बजार नजिकै अवस्थित यी दुई सम्पदाहरुको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन कार्यले दीर्घकालीन र योजनाबद्ध प्रयाश खोजिरहेका छन् ।
दह, ताल र पोखरी
सरुमारानीकै किमीचौर दह, लिघाको कोटवारा दह, अर्खाको कैलाश दह, रजवाराको रानीबन दह र सौतामारेस्थित तल्लो र माथिल्लो खर्क पोखरी संरक्षण र सौन्दर्यकरणका काम गरी आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न जरुरी रहेको छ ।
स्वर्गद्धारीबाट ६ किमी मात्रै नजिकको दूरीमा अवस्थित उदयपुरकोट नेपाल एकीकरणअघि विद्यमान स–साना राज्य र रजौटाहरु रहेको बेलामा देशकै एकमात्र ब्राम्हण राजाले शासन गरेको राज्य थियो । २०१६ सालमा राजा रजौटा उन्मूलन गरिएपछि यहाँका राजाले आफ्नो दरबार स्थानीय विद्यालयलाई सुम्पेर बसाइसरी बर्दियातर्फ लागेका थिए । हाल माण्डवी गाउँपालिकाले यसको विशेष भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रयत्न गरेको छ । तिरामको तिमले, मर्कावाङ, रातापानी, बाटुले र उदयपुरकोटमा यस राज्यको क्षेत्रलाई समेटेर यस स्थानमा आवश्यक संरचनाको निर्माण तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न अबिलम्व ध्यान दिनुपर्छ ।
झिमरुक र माडी नदी आपसमा मिलेर एउटै राप्ती नदी बन्ने संगमस्थल हो– ऐरावती । प्यूठानको हंसपुरका साथै ढुंगेगढी र बाङ्गेसाल तथा अर्घाखाँचीका दाङबाङ, सिद्धारा, जलुके, धनचौर, जुकेना र नुवाकोटका बासिन्दाहरू माघे सक्रान्तिमा यहाँ नुहाउन आइपुग्दछन् । प्यूठानकै पकला, बरौंला, बिजुलीआदि गाउँ तथा कपिलबस्तु र दाङ जिल्लाका गरी बर्षेनी १०–१२ हजार तीर्थयात्रीहरू माघे सक्रान्तिको अवसरमा ऐरावती पुग्दछन् । जहाँ राती ‘सोरठी नाच’बाट बेग्लै आकर्षण र मनोरञ्जन लिन सकिन्छ । पहिले १०–१२ वटा सोरठी नाँचका समूह पुग्ने भए पनि पछिल्लो अवधिमा सोरठी समूहको उपस्थितिमा कमी आएको पाइन्छ । यसको संरक्षणमा समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
भालुबाङ–प्यूठान मोटर बाटोमा अवस्थित बड्डा“डा बजारबाट करिब १८ किलोमिटर टाढाको दू्रीमा अवस्थित ऐरावतीसम्मको सडकमा जीप सेवा सञ्चालित रहेको छ । साथै, अर्घाखा“चीको ठाडादेखि सिद्धारा–जुकेना–जलुके हु“दै ऐरावतीसम्म मोटरबाटो बनेको छ ।
ऐरावतिमा वृषलाल गिरीले निर्माण गरेको ऋषेश्वर मन्दिर र आश्रमसमेत रहेको छ । यो स्थान हाल ऐरावती गाउँपालिकामा पर्दछ । यसकै नामबाट गाउँपालिकाको नाम ऐरावती राखिएको हो । यसस“ग ऐरावत हात्तीको पौराणिक सन्दर्भ र कथा पनि जोडिएको चर्चा हुन्छ । घनाजंगलको बीचमा अवस्थित यस ठाउ“को वरिपरि जलुके–दाङबाङ र हंसपुरका बासिन्दाहरूको बेसी रहेको छ । तर, खासै गाउ“–बस्ती छैन । ‘नौमुरे जलविद्युत आयोजना’ िनिर्माणपछि यस पवित्र धार्मिक तथा मनोरम पर्यटकीय क्षेत्रमा विशाल जलाशय बन्नेछ । त्यसको उचित हेक्का गरेर पर्यटन विकासका बहुआयामिक प्रयासहरु अघि बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । किनभने, यहाँ बन्ने जलाशय कपिलबस्तु, दाङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र प्यूठानलगायतका जिल्लहरुको महत्वपूर्ण नयाँ संरचनाका रुपमा उल्लेखनीय गन्तव्य बन्ने निश्चित छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधार विकास
लुम्विनी–स्वर्गद्धारी–मुक्तिनाथलाई सडक सञ्जालद्धारा जोड्ने प्रमुख माध्यम सालझण्डी–ढोरपाटन मार्ग हो । साथै, पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट भालुवाङ–भिंगृ–स्वर्गद्धारी, स्वर्गद्धारी–थवाङ–बुर्तिवाङ–मुक्तिनाथ, कृष्णसेन–आश्रित प्रादेशिक मार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र कोइलाबास–बाग्दुला–ठूलाबेसी–भीमगिठे–कोरला मार्ग व्यवस्थित भइरहेका छन् । उल्लिखित सडक सञ्जालको निर्माण र संचालनले सांस्कृतिक पर्यटनको विकास र प्रबद्र्धनमा महत्वपूर्ण आधार खडा हुने निश्चित छ ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र नेपालगञ्जस्थित प्रादेशिक विमानस्थल हवाई यातायातका प्रमुख आधार हुन् । सिमिचौर गुल्मी, चाल्नेटार (७७ करोड लागतको प्रस्ताव) प्यूठान, अर्घामैदान अर्घाखाँची, टरीगाउँ दाङलगायत विमानस्थलहरुले हवाई कनेक्टिभिटी सहज बनाउन सक्नेछन् । गौमुखी, मदाने, झिमरुक, स्वर्गद्धारीआदि गाउँ र नगरपालिकाले झण्डासहितका हेलिप्याड निर्माण गरेर हेलिकोप्टर सेवको पूर्वाधार बनाउन योगदान गर्न सक्छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको ५० लाख बजेटमा मच्ीछ–ढाँड–दहियाल्ना–तामाखानी–झाक्रीढुंगा–नांगी–गौमुखी–अग्लुङ–खुङ–नारीकोट–बाँदीकोट ओखरकोट–ढाँड र मच्छी जोड्न पदयात्रा मार्ग निर्माण भएको छ । यसको प्याकेज निर्माण गरी बजारीकरण गरिनुपर्दछ ।
प्रदेश सरकारको ५० लाख बजेटमा बेल्वास–लिस्ने–लिस्नेभञ्जयाङ–झुलेनी–बाहने पदयात्रा मार्गको सर्भेक्षण र निर्माण कार्य जारी छ । यसलाई भविष्यमा स्वर्गद्धारी–गौमुखी पदयात्रा मार्गको निर्माण गरी संचालनको आधार मार्गका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति बाहने–खवाङ–दहियाल्ना खण्डको निर्माण कार्यलाई पनि जोड्नुपर्दछ ।
स्वर्गद्धारी महाप्रभुको जन्मस्थल रुम्टी र आश्रम स्वर्गद्धारी जोड्न रुम्टी–स्वर्गद्धारी पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिनु आवश्यक छ । यसले स्वर्गद्धारी आउने तीर्थयात्रीहरुलाई कम्तिमा एकरात रुम्टी र सखीलेकसम्म पु¥याएर बसाइ लम्याउन सकिन्छ । स्वर्गद्धारी महाप्रभु–हंसानन्द गिरीका गुरु सच्चिदानन्द गिरीले तपस्या गरेको सखीको लेकसम्मको महिमालाई तपोभूमिका रुपमा विकास गरेर यस क्षेत्रको विकासलाई नयाँ स्वरुप प्रदान गर्न सकिन्छ । मोटरबाटो बन्नसाथ प्रचलित भिंगृ–स्वर्गद्धारी, चौघेरा–धरमपानी–स्वर्गद्धारी पदमार्गको पूर्वाधार व्यवस्थित गरी सहज र सुविधायुक्त बनाउन जरुरी छ । यस्ता मुख्य पदमार्गहरुले भविष्यमा ग्रामीण पर्यटनको विकास र प्रबद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संभावना विद्यमान छ ।
विगतमा स्वर्गद्वारीमा केवुलकार निर्माणका विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् । मनकामना केवुलकार, लक्ष्मी ग्रुप, चन्द्रागिरी हिल्स र कालिञ्चोक केबुलकारले यहाँ अध्ययन र लाइसेन्स प्राप्तिका कार्य अघि बढाएका भए तापनि ठोसढंगले यस परियोजनाको कामले अन्तिम रुप लिएर अझै अघि बढेको छैन । भिंगृ,जलुके–डाडाँखर्क–धरमपानी हुँदै आश्रमबाहिर मूल गेटमुनि स्वास्थ्यचोकीसम्म केवुलकार निर्माण र संचालन गर्दा बुढाबुढी, अशक्त र अन्य सबै तीर्थयात्रीहरुका निम्ति यात्रा सहज हुनजाने देखिन्छ । दाङबाट स्वर्गद्वारीसम्मसमेत केबुलकार निर्माण गर्ने अध्ययन भइरहेका छन् । केवुलकार निर्माण र संचालनमा आश्रमको लगानीमा सहभागिता अनिवार्य देखिन्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख र सहायक गन्तव्य
क्र.सं स्थानीय तह मुख्य गन्तव्य सहायक गन्तव्य
१ स्वर्गद्धारी नगरपालिका- स्वर्गद्धारी आश्रम भिंगृपार्क, सारीको भू–बनोट अवलोकन
२ प्यूठान नगरपालिका- भित्रीकोट सहिद स्मृित पार्क, लिस्ने भञ्ज्याङ, डल्ले सरायँ
३ माण्डवी गाउँपालिका- उदयपुरकोट दरबार झिमरुक जलविद्युत गृह, बाटुले, रातापानी, बराहगुफा
४ मल्लरानी गाउँपालिका- मल्लरानी भ्यू प्वाइन्ट झाँक्रीस्थान, खैरासराङकोट, पालुकास्थान
५ झिमरुक गाउँपालिका- रक गार्डेन सौतामारे, ओखरकोट, गडीकोट, दहियाल्ना, स्नाथान, मुर्चुलधुरी
६ गौमुखी गाउँपालिका- गौमुखी तामाखानी, झाँक्रीढुंगा, रानीबन दह, नाङ्गी
७ नौवहिनी गाउँपालिका- कोठीभीर
८ ऐरावती गाउँपालिका- ऐरावती सहिद स्मृति पार्क बरौला, बिजुलीकोट, दाङबाङ
९ सरुमारानी गाउँपालिका- गढी दरबार रानीकुवा, किमीचौर दह, राप्ती नदी बिच
बजारीकरणका निम्ति १२ प्रस्ताव
-प्यूठानको पर्यटकीय नक्सा तयार गरी गन्तव्यहरुको योजनाबद्ध प्रबद्र्धन गर्ने ।
-स्वर्गद्धारी, मल्लरानी र भित्रीकोटमा हट एयर बेलुनको उडान, प्याराग्लाइडिङ र स्काइ ड्राइभ संचालन गर्ने ।
- काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीबाट स्वर्गद्धारी दर्शन गर्न हेलिकप्टर सेवाको संचालन गर्ने ।
- काठमाडौँ–स्वर्गद्धारी–गौमुखी–लुम्बिनीबाट स्वर्गद्वारी र गौमुखीसम्म पर्यटक यातायात (हरियो प्लेट) का गाडी संचालन गर्ने । लुम्बिनी–स्वर्गद्धारी टुरिष्ट बस संचालन गर्ने ।
- चाल्नेटारमा स्वर्गद्धारी विमानस्थल निर्माण गरी हवाइ सेवा संचालन गर्ने । स्वर्गद्धारी–लखनउ, वाराणसी, काठमाडौँ, पोखरा र भैरहवासम्म सिधा हवाई उडानको संचालन गर्ने ।
- चतुर्भज–चकचके माडी नदीमा डुंगा, मोटरबोट संचालन गर्ने । नौमुरे जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि मोटरबोट र क्रूज संचालनमा ल्याई डिनरको प्रबन्ध मिलाउने ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्यटन सूचना केन्द्र, एकएक सामुदायिक होमस्टे, एकएक पदयात्रा मार्ग र पर्यटकीय कम्तिमा एक पर्यटक स्तरीय होटल ÷रिसोर्ट संचालनको व्यवसायिक वातावरण मिलाउने । मुख्य गन्तव्यहरु लक्षित गरी २÷२ जना टुरिष्ट गाइडको व्यवस्था गर्ने ।
- प्यूठानका गन्तव्यहरु लक्षित गरेर ४ रात ५ दिनको ‘स्वर्गद्धारी प्यूठान भ्रमण प्याकेज’ निर्माण गरी प्याकेज टुर संचालन गर्ने ।
- लिस्ने भन्ज्याङ र मल्लरानीमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी ‘सप्ताहान्त मनोरञ्जन’ स्थलको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने ।
- पर्यटन क्षेत्रका निम्ति अत्यावश्यक जनशक्तिको विकास र उपलब्धतामा स्थानीय तहहरुको लगानी बढाउने र रोजगारी एवं स्वरोजगारी बढाउने ।
- स्वर्गद्वारी आश्रम, लगानीकर्ता र स्थानीयको सहभागितामा केवुलकार निर्माण गरी पर्यटक आकर्षण बढाउने ।
- सन् २०२१ लाई ‘स्वर्गद्धारी–गौमुखी भ्रमण वर्ष’ अभियान संचालन गर्ने ।
आदिमानव रामापिथेकसको जिवाशेष भेटिएको बुटवल क्षेत्र र आसपासका धेरै जिल्लाहरुमा अनेकन् किल्ला, कोटहरु (छिल्लीकोट– दाङ, खुंग्रीकोट–रोल्पा, एकमात्र ब्राह्मण राज्य उदयपुरकोट, भित्रीकोट, ओखरकोट र गडीकोट–प्यूठान, अर्घा र खाँचीकोट–अर्घाखाँची) खलंगा, गढी (अंग्रेज साम्राज्यलाई युद्धमा पराजित गरेका जितगढी, नुवाकोटगढी र ढुंगेगढीलगायतका विभिन्न गढीहरु), ऐतिहासिक दरबार (अग्र्यौली, रानीमहल)आदि जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरु रहेका छन् । उल्लिखित कोटहरु केही उदाहरण मात्रै हुन्, जसमा चन्द, अधिकारी, जाट, शाहआदि राजारजौटाहरुले राज्य संचालन गरेको इतिहास छ । विभिन्न कोट र खलंगा तत्कालीन रजौटाहरुका मुकाम(केन्द्र)हरु थिए । नेपाल एकीकरण हुनुअघि यी त्यसबेलाका शक्तिशाली राज्यहरुमध्येमा गनिन्थे । पश्चिम नेपालकै एक समयको शैक्षिक केन्द्र खिदिम पनि आधुनिक विकास र संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ ।
समग्रमा लुम्बिनी–स्वर्गद्धारी तथा रुरु–रेसुंगा–गौमुखीलाई केन्द्रित गरी प्रदेश नं ५ को पर्यटन विकासमा उचित र ठोस प्रयास केन्द्रित गर्दा केही वर्षभित्रै प्यूठान पर्यटनको आकर्षक र महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्ने निश्चित छ । यस निम्ति स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले लुम्बिनी, रेसुङ्गा, गौमुखी र स्वर्गद्धारीकेन्द्रित पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
प्यूठान गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२१ लाई ‘स्वर्गद्धारी प्यूठान’ भ्रमण वर्ष अभियान घोषणा गरेर विशेष रुपमा प्रबद्र्धन र बजारीकरण गर्नुपर्दछ । यो यतिबेलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व भएको छ ।
२०७२ चैत ५ देखि ११ गतेसम्म सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालको आयोजनामा लुम्बिनी–स्वर्गद्वारी भ्रमण तथा प्याकेज निर्माण कार्यको अगुवाई र संचालन गरिएको थियो । भैरहवामा मैले उद्घाटन गरपछि पाल्पा, रुरुरेसुंगा, सन्धिखर्क, सुपादेउराली, नरसिंहस्थान, सौतामारे, स्वर्गद्वारी हँुदै सदरमुकाम खलंगामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले र नुवाकोट गढी पुगेर मैले अन्तिम समापन गरेका थियौं । त्यतिबेला सोट्टोले ६ रात ७ दिनको टू प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो । यो यस क्षेत्रमा चालिएको पहिलो कदम थियो ।
आउनुहोस, सबैको साझा प्रयाशबाट केही न केही योगदान गरौं ! हामी आफैले आफ्नो मातृभूमिलाई सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा प्रबद्र्धन र विकास गर्न अग्रसर बनौं !!
(प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका १ अर्खामा आयोजित गौमुखी मिडिया सम्मेलन २०७६मा प्रस्तुत कार्यपत्र)
अपडेट : 2019-04-17 17:12:28
कालापत्थर घोषणा पछिको नेपाल
नेपालमा लगानी सम्मेलनः आशा र औचित्य